Programmer's Diary: ခြင်္သေ့အတုများနှင့် ရင်ဆိုင်ခြင်း
ရေးသူ- ညီညီ(သံလွင်) ၊ ရေးသည့်အချိန်- 12:13 PM
အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာ ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ အားကစားသမားတွေ၊ ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ အနုပညာရှင်တွေ ဘယ်တော့မှ မပေါ်ပေါက်နိုင်ဘူးဆိုတာ စင်္ကာပူနိုင်ငံသားတွေ သဘောပေါက်ချိန်တန်ပြီ။ (မြန်မာတွေလည်း အတူတူပဲ…သဘောပေါက်သင့်ပြီ)
စင်္ကာပူနဲ့ လူဦးရေအတူတူလောက်ပဲရှိတဲ့ နယူးဇီလန်နိုင်ငံမှာ အိုလံပစ်ရွှေတံဆိပ်ဆုတွေ အများအပြားရနေချိန်မှာ (ပီကင်းအိုလံပစ်မှာတင် ရွှေတံဆိပ် ၃၆ ခုနိုင်တယ်)….. စင်္ကာပူကတော့ ငွေနဲပေါက် ၀ယ်ယူထားရရှာလေတဲ့ ပြည်မကြီးက အားကစားသမားတွေ အစွမ်းအစနဲ့ မကြာခင်ကမှ ငွေတံဆိပ်ကို ရှားရှားပါးပါး ရသွားရှာတယ်။ ဖြစ်ပုံက။
ဒီpost ကို english လိုရေးပြီးPublish လုပ်ရင်ကောင်းမယ်
Letter to Editor ဖြစ်ဖြစ်လုပ်သင့်တယ်..
Haha u are right! they are fate Lion . Now result out 0-1 Lion lost to Vietnam.Vietnam won is not because of luck, their skill real better than Lion. That result shown us that money can not make everything....
“မြန်မာ အသင်းဟာ စည်းကမ်း မရှိဘူး။ အားကစားသမားစိတ်ဓာတ် မရှိဘူး။ အရှုံးကို ၀န်မခံဘူး။ ဒိုင်လူကြီးရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို စောဒကတက်တယ်။ မြန်မာအသင်း စည်းကမ်း မရှိတာ လူချတာ ခပ်ကြမ်းကြမ်းကစားတာတွေဟာ အခုလည်း အရင်ကအတိုင်း မပြောင်းလဲသေးဘူး ”